Chii chinotariswa neApple Watch Series 3 ine LTE? | IPhone nhau
Jesu anotema | | Apple Watch
Kuenda kweiyo nyowani Nhepfenyuro dzeApple 3 Yakagadzirisa musika weWatch, ichivaita kuti vazvimiririre kubva kune iyo iPhone. Iyi modhi nyowani inosanganisira LTE Asi isu tinonyatso kuziva zvatinowana kubva kuiyi tekinoroji nyowani? Pane kusahadzika kwakawanda kwatinogadzira patinotaura pamusoro peichi chitsva kufambira mberi uye mutsauko wainayo neayo "hama" isina LTE.
Iko hakuna chete mutsauko wezvehupfumi, unova pachena, asi isu tichaisawo pfungwa pakuongorora zvakadzama zvimwe zvinhu zvinokubatsira kana iwe uchida kutenga chigadzirwa ichi uine kana usina LTE.
1 Apple Watch Series 3 ine LTE
2 Kuenzanisa uye uye pasina LTE
3 Akanaka maficha eiyo modhi neLTE
4 Zvinhu zvisina kunaka zvekuve neLTE
Apple Watch Series 3 ine LTE
Jeff Williams akatizivisa ku modhi nyowani Apple Watch, yakachengetwa yakatanga musi waGunyana 15, iine nhau huru dzatakambotaura nezve kubatanidzwa kweLTE. Ichokwadi kuti ichi hachisi chega chitsva icho chinopa nemhando yayo yapfuura, iyo yakabviswa kubva kune yepamutemo Apple chitoro. Muchikamu chino isu tichazotarisa pane iyo modhi neLTE kuziva zvese nezvazvo.
Pakutanga kuona, iyo nyowani Apple Watch Series 3 inopa dhizaini yakafanana neiyo yapfuura modhi kunze kwegumbo kurudyi iro rine ruvara rutsvuku pakati.
Zviripachena, mukati mayo ndipo painopa misiyano mikuru iyo, sezvatove tatsanangura muchinyorwa chinotevera nezve iyi modhi nyowani, inoita kuti ive kufambira mberi kukuru pachikamu cheApple.
Kuenzanisa uye uye pasina LTE
Kana isu tichienzanisa ese ari maviri mamodheru eApple Watch Series 3, (iine uye isina LTE) isu tichakurumidza kupedzisa neiyo ongororo. Musiyano chete izvo zvavanopa ndezvavo kuchengetedza kugona. Izvi zvine 8GB mune modhi isina LTE nepo modhi neLTE, zvaizosvika 16GB yekuchengetedza kwemukati.
Zvimwe zvakasara zvemukati zviri zvakangofanana pane ese mamodheru. Izvi, unogona kuvaona mu Apple webhusaiti. Naizvozvo, kuziva misiyano uye izvo imwe modhi inotipa uye imwe, isu tinofanirwa kuongorora mashandiro avo.
Akanaka maficha eiyo modhi neLTE
Kutanga, uye zviri pachena, ndeye mukana wekufona kubva pakurinda kwedu tisingafanirwe kuve neiyo iPhone padyo. Kungova neWatch tinokwanisa kufona nenzira imwecheteyo yatinoita kubva ku iPhone. Pamusoro pekufona, tinogona zvakare kutaura kuburikidza text messages Saizvozvowo.
Chechipiri isu tine iyo mimhanzi. Kutenda kuisirwa kweLTE isu tichakwanisa kushandisa, kwenguva, ye Apple Music tisina kushandisa yedu iPhone chero chinhu. Panguva iyoyo uye pasina nhau nezvazvo, Spotify hazvizopa mukana wekuita kuti zvienderane nemuchina uyu.
Y en tercer lugar, damos la bienvenida a Siri muWatch yedu. Kusvika ikozvino, isu taida iyo iPhone kuti tikwanise kubvunza Siri kuti itigadzirire chiyeuchidzo, kutumira kukoka kana chero mumwe murairo. Kubva ikozvino zvichienda mberi, tinogona kuita zvese kubva kuWatch pasina zvinoenderana nechinhu. Sezvo isu tichigona kumisikidza ivo, isu tinogona kugamuchira zviyeuchidzo kubva kune izvo zvinoshandiswa pasina kudikanwa kweako nhare mbozha.
Zvinhu zvisina kunaka zvekuve neLTE
Sezvo zvakajairwa, hazvisi zvese zvingave zvakanaka. Iyo nyowani Apple modhi ine imwe dhata iyo isiri kunyatso kukurudzira kuinyatso kuishandisa iko kwavanotarisira. Ndokunge, kunyangwe iine mamwe mabasa anofanirwa kuve anobatsira kune vese vashandisi, mhedzisiro iyo izvo zviripo zvinoita kuti zviome kugara kwenguva refu yenguva. Isu tinoreva hupenyu hwebhatiri.
Pamwechete, isu takatanga kubva ipapo izvo zvaizotitorera padhuze Maawa gumi nemasere mushure mekushandisa zvakajairika. Apple inoratidzira iyo, ingangoita, neiyo nguva yekudzora (makumi mapfumbamwe), kugashira dzinosvika makumi mapfumbamwe ziviso, maminetsi makumi mashanu ekushandisa application uye kudzidziswa ingangoita maminetsi makumi matatu nekutamba kwemimhanzi.
Asi awa awa ari kudzikira, sezvazviri zvine musoro, sezvo isu tichifambidzana zvakanyanya naye, asi isu tinoshamiswa nekuderedzwa kwakanyanya.
Hupenyu hwebhatiri kana tiri kuridza odhiyo inongoverengerwa chete 10 maawa, inova yakajairwa mari, ichienzaniswa nemamwe madivayiri. Iyi nguva yakafanana kana tikataura nezvazvo kudzidziswa kwemukati. Panzvimbo iyoyo, ingatemwa nepakati, 5 maawa, kana iko kudzidziswa kuri panze uye neGPS yakaiswa. Kune zvimwe, kana isu tichiwedzera iyo GPS Kubatana kweLTE, iyo nguva inofungidzirwa ndeye chete 4 maawa.
Uye kana izvo zvichiratidzika kunge zvakapfupika kwenguva, patinoti kushandisa iyo Apple Watch Series 3 yekufona, zviverengero zviri kunetsa. Kana isu tine iyo Kurinda yakabatana ne iPhone, hupenyu hwebhatiri hwaizove 3 maawa. Kana tikashandisa LTE yekufona zvakananga kubva pawachi, iyo inofungidzirwa nguva yekutaura uchienderera zvinongova zvishoma kupfuura 1 awa.
Imwe yeasina kusimba mapoinzi eiyi modhi kutengeswa kwayo. Kusvikira nhasi, uye tinotarisira kuti izvi zvichaita nani, hazvigoneke kutenga chigadzirwa neLTE mune yakawanda nyika, kusanganisira Spain. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekushaikwa kwezvibvumirano nemakambani ekubatanidza eLTE.
Hapana mubvunzo kuti iri budiriro naApple kuve vakashandisa LTE muApple Watch yavo asi chokwadi ndechekuti, nhasi, mashandiro uye kugadzirwa kwaungawana kuri kushoma. Chekutanga pane zvese ne kushaikwa kwezvibvumirano nemakambani anobva kunyika dzakasiyana, Iyo inoganhurira iwo maapo ekutengesa uye chechipiri, ne hupenyu hwebhatiri ishoma kwazvo zvekuti inopa.
Muchidimbu, iyi nyowani nyowani tekinoroji ichashandiswa kune chaiwo zviitiko zvenguva pfupi kwazvo kana tichida kuti iyo Watch itibate zuva rese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chii chinotariswa neApple Watch Series 3 ine LTE?
Alonso Alejandro Zúñiga Beltrán akadaro
Inosanganisira zvakare nesafire lampshade uye zvedongo kesi.
Pindura kuna Alonso Alejandro Zúñiga Beltrán
Chikamu chezasi chete ndeche ceramic, iyo inosangana neganda. Sapphire crystal inongowanikwa chete neyesimbi modhi, kwete iyo aluminium imwe.
Pedro Amorós Torres akadaro
Ngatione, chinyorwa ichi chinopa ruzivo rwusina kusimbiswa uye rwakananga kunze kweheti. Paunoti "mutsauko chete wavanogadzira kugona kwavo" unenge usiri kungogadzira. Iyo wachi haina kungove yakanyatsosiyana padanho rehardware, asi zvakare ine processor 70% nekukurumidza kupfuura akateedzana 2, zvakare inosanganisira iyo W2 chip (iyo inokuudza kuti ndeyei), altimeter uye barometer.
Kana iwe uchitaura nezve hupenyu hwebhatiri, zviri pachena kuti panguva yekufona kwenzwi zvichave zvishoma ... asi Apple yakataura muchiratidziro kuti mune mamwe mamiriro ese nguva INOGARA ICHAKANGO SEZVIMWE zvakapfuura modhi, saka zvese iyo data yauri kupa nezve hupenyu hwebhatiri inobuda muheti zvakare. Paunotaura kuti haigone kutengwa muSpain, iri nyowani uye zvachose FALSE. Inogona kutengwa zvakakwana izvozvi kuApple Store muSpain.
Ndinokukumbirisa, ndapota, usanyora chero chinhu nekuti unotuka avo vedu vane pfungwa yezvatinotaura.
Pindura Pedro Amorós Torres
Zvino ndapota verenga chinyorwa zvakare, ziva kuti urikuenzanisa iyo Series 3 uye Series 3 LTE, uye unzwe kunyara nekunyora chinyorwa chawakanyora uye kupomera munyori wekunyora marara kana chiri Chinhu chega chinogona kuve chakakodzera seichi ndicho chirevo chako.
Jesu Pfupi akadaro
Mhoro Pedro, semunyori wechinyorwa ndiri kuenda kujekesa maererano nekomendi yako.
Chekutanga pane zvese, ini ndinoona kuti iwe unoziva izvo zvinongedzo zveApple Watch chaizvo, sezvatinoita tese, asi zvakakoshawo kuti uverenge chinyorwa zvachose usati wataura uye nekutaura nenzira kwayo gare gare.
Pakutanga kwayo, zvinotaurwa pachena kuti kuenzanisa kunoitwa kuri pakati peApple Watch Series 3 neLTE uye isina LTE, saka misiyano nemhando yayo yapfuura (Series 2) haina basa nesu. Zvese zvaunotaura ndezvechokwadi asi isu hatisi kureva nezvazvo.
Chechipiri, ini ndinokukoka iwe kuti uverenge kuwanikwa kweiyo eWatch Series 3 mamodheru ane LTE kuSpain uye utiudze kana zvandinotaura mukutumira ichokwadi kana kwete.
Uye pakupedzisira, ndisati ndanyora posvo, vese vandaishanda navo neni tinozvizivisa uye tinonyora zvakakwana kuitira kuti zvirimo muchinyorwa zvacho zvive zvakakwana sezvinobvira.
Pindura kuna JesúCorta
Mhoro Pedro, isu tichafanirwa kutarisa kunzwisisika kwedu kwekuverenga. Mupepeti anojekesa kuti anofananidza iyo Series 3 neiyo Series 3 LTE.
Unofanira kunge uri Benzi.
Jorge Arancibia akadaro
Chii chinorehwa neLTE. Ndatenda
Pindura Jorge Arancibia
LTE inomirira Long Term Evolution. Iyo nharembozha yekutaurirana yakagadziriswa ne3GPP, musangano wakagadzira nekuchengetedza GSM uye UMTS.
Ini ndaida kubvunza zvinotevera: kuitira kutenga Apple Watch nhevedzano 3 (GPS + nhare), inogona kushandiswa nenzira yakajairika (ndokuti, isina LTE uye yakabatana neiyo iPhone) kana munyika yangu pasina chibvumirano nemakambani izvozvi?
Ehe, zvakanaka kwazvo kugadzirisa iyo chinyorwa mushure uye kusiya vanhu zvakaipa.
Boka racho rinotonhorera